Voatsipaky ny lehibe !
O ry Jean a ! Fa rehefa tsy faly ve dia tsy maintsy mitokona e ? Efa mitady tsy handeha amin’ny lojika intsony anie izany revinareo izany e e ! Dia tsy mba hivoatra mihitsy ve isika ity fa tena raiki-tapisaka ilay hoe sarotra ny miala amin’ny mahazatra e ?
Ao ve ry Jean a ? Manomankomana an’ilay hoe domina tapany handoa erany izany izao ry Jean, ka ny zaza madinika no ezahina hosasana atidoha amin’ny hoe mahavita azy ianareo,
rehefa leon’ny don-tandroka avy amin’ny ray aman-dreny sy efa vory saina ? Nahamaika anareo ery ny nanongana an’ilay olona nanao izao ataonareo izao tamin’ny fo, ary tsy mba nanisy tombo sy hala ny Malagasy iray manontolo. Izao ianareo dia mangala-tahaka ny ataony satria fantatrareo fa nahomby izy. Ny soa tokoa fianatra. Izao anefa no tsarovy : ny fitiavan-tanindrazana tsy azo atao “kopikole”, ka hoe efa halam-bahoaka eto Iarivo, dia mody haka ny fon’ny ankizy sy handrisika azy ireo handresy lahatra fa tena miasa sy mitsinjo vahoaka ny manga kravaty. Tsara ny ataonareo hoe mizara sy manome, fa toherinay sy ampahafantarinay ny vahoaka tsy mandady harona kosa ny fihetsika feno fihatsarambelatsihinareo hoe domina tapany handoa erany mba hamerina anareo amin’ny seza ! Raha tena mahay ianareo ahenao aloha ny vidin’ny vary. Raha tsy izay dia akombony ny vava, ary aza miteny kely akory hoe mitsinjo ny taranaka, fa sao dia hirehitra aminareo ny hatezeran’ny Malagasy leo ny Hery Velona Mpambotry firenena an !